इरानबिरुद्ध फेरी जाइलाग्यो अमेरिका, ट्रम्पको निर्देशनमा चारवटा इरानी कार्गो कब्जामा — Sanchar Kendra
१पशुपतिमा जलाइँदै गरिएको शव प्रहरीले किन लियो नियन्त्रणमा, यस्तो छ कारण
२माधव नेपालले दिए ओली समूहलाई ‘धुलोछाप’ पार्टीको संज्ञा
३सर्वसाधारणलाई निषेध गरेर प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पुल उदघाटन
४चीन र भारतका सैनिकबीच सीमामा फेरि भि’डन्त, २४ सैनिक घाइते, अवस्था तनावपूर्ण
५प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पशुपतिमा पूजा
६प्रचण्ड-माधव समूहद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा, यस्ता छन कार्यक्रम
७६ महिने विकास खर्च निराशाजनक
८आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
९काठमाडौं महानगरका सबै विद्यालयलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति
१०चीनमा फेरी दिखिन थाले कोरोनाका नयाँ बिरामी, नियन्त्रणका लागि सी जिनपिङले थाले यस्तो तयारी
११सीमा क्षेत्रमा भेटिए १९ मृत व्यक्ति, कसरी घट्यो यस्तो सबैको मुटु हल्लिने घटना ?
इरानबिरुद्ध फेरी जाइलाग्यो अमेरिका, ट्रम्पको निर्देशनमा चारवटा इरानी कार्गो कब्जामा
एजेन्सी । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले इरानी इन्धन बोकेर भेनेजुएलातर्फ गइरहेका चारवटा इरानी कार्गो ट्यांकर नियन्त्रणमा लिएको छ । एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले इन्धनले भरिएका पानीजहाज रोक्न सैन्यबल प्रयोग गर्नु नपरेको बताएका छन् ।
अमेरिकी तटीय रक्षकहरुले जहाजका मालिक, वीमा कम्पनी र क्याप्टेनलाई अमेरिकी अधिकारीसमक्ष जहाज बुझाउन चेतावनी दिएका थिए । भेनेजुएलाका लागि इरानी राजदूत होजाड सोल्तानीले तेल ट्याँकर र त्यसका मालिक दुबै इरानी नभएको दाबी गरेका छन्।
गत महिना अमेरिकी संघीय न्यायाधीवक्ताले एक व्यापारी महमुद मदानीपोरले व्यवस्था गरेको कार्गो जहाज नियन्त्रणमा लिन अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।अधिकारीहरुका अनुसार मदानीपोरको इरानी क्रान्तिकारी गार्डसँग निकट सम्बन्ध रहेको छ । अमेरिकाले इरानी क्रान्तिकारी गार्डलाई आतंकवादी संस्थाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।
न्यायाधीवक्ताका अनुसार चारवटा इन्धन ट्याँकरबाट ११ लाख ब्यारेल ग्यास भेनेजुएलातर्फ पठाइएको थियो । तर, यी जहाज भेनेजुएला पुग्न पाएका थिएनन् र बीचमै बेपत्ता भएको ठानिएको थियो । दुई वटा जहाज भने केप भर्ड नजिक पुनः देखा परेका थिए ।
अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका इरान र भेनेजुएलामाथि थप कडा कारबाही गर्ने अमेरिकाले चेतावनी पनि दिएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समूहसँगको कारोबार घट्न थालेपछि पछिल्लो समय भेनेजुएलाको निकोलास मदुरो सरकारले इरानसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै लगेको छ ।
गत मे महिनामा मदुरोले पाँचवटा इरानी पानीजहाजबाट इरानी इन्धन आफ्नो देश आइपुगेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्। त्यसबखत राजधानी काराकास सहित प्रमुख शहर बजारमा तेलका लागि मानिसहरुलाई लामो लाइन बस्नु परेको थियो ।